The 20 best business services 2019 ― DoneMaster မွနျမာ
Accounting Auditing and Consultancy Services
ကျွန်မ ဒေါ်မီမီစိုးသည် စရင်ကိုင် စာရင်းစစ် နှင့် အတိုင်ပင်ခံအလုပ်ကို နိုင်ငံတကာ မှ ကုမ်ပဏီ များနှင့်အလုပ်အကိုင်တွဲလုပ်ဖူးသူဖြစ်ပြီး NGO အစိုးရအဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းမှာလဲ အလုပ်လုပ်ဖူးသူဖြစ်ပါတယ်
CB Bank Credit Card ကိုသုံးပြီး 0% အတိုးနှုန်းနဲ့ ရွှေနန်းတော်မှာ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး!!!
CB Bank ၏ Credit Card ကိုင်ဆောင်သူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေးအနေနဲ့ ရွှေနန်းတော်စိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာ အနည်းဆုံး ကျပ်(၁၀၀,၀၀၀) ဖိုးမှစပြီး ဝယ်ယူသူတိုင်း 0% အတိုးနှုန်း၊ (၆)လအရစ်ကျစနစ်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မယ့် Promotion ကာလအား (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၁) ရက်နေ့အထိတိုးမြင့်ထားပါသဖြင့် ရွှေချစ်သူများသွားရောက်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့ သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်…
အသေးစိတ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ CB Bank Contact Center ဖုန်းနံပါတ် (01-2317770)သို့ (24)နာရီ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
GabarMart သည် နာမည်ကျော် Amazon Website နှင့် အခြားနာမည်ကြီး e-Commerce Websites များမှ မှာယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ (ရန်ကုန်မြို့အတွင်းအိမ်အရောက်နှင့် အခြားမြို့များသို့ ကားဂိတ်အရောက်) ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပြည်တွင်း Website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Htoo Aung Linn Car Rental Service
အိမ်စီးကားသန့်များကို လချုပ် / နှစ်ချုပ်
ယဉ်မောင်းအပါ / မပါ , မိသားစု အသင်းဖွဲ့ Comapny
ရုံးအဖွဲ့များအတွက် ရက်ပိုင်း အချိန်ပိုင်း ငှားရမ်းခြင်း
ဘွဲ့ယူ/ မင်္ဂလာဆောင်, ရုံးဖယ်ရီ အကြို/ အပို့
🇲🇲🇲🇲🇲🇲 12.Feb.2019 တွင်ကျရောက်သော ( ၇၂ ) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ကို HTS Japan Car Service Center မှ ဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပါသည်။🇲🇲🇲🇲🇲🇲
📅12.Feb.2019 လွပ်လပ်ရေးနေ့တွင် HTS Japan Car Service Center ပိတ်ပါသည်။📅
💯 မိတ်ဆွေတို့၏ ကားများကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အပ်နှံနိုင်သည့် HTS Japan Car Service Center...... 💯
🏢အမှတ်၅၊ သီရိမွန်၁၀လမ်း ၊မင်္ဂလာသန်းမြင့်နောက်ကျော၊ Times Hotel မျက်နှာချင်းဆိုင် ၊ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံ၊ မရမ်းကုန်း၊ ရန်ကုန်မြို့။
🌐Google Map မှာ HTS Myanmar Japan Car Workshop ရိုက်ပြီး အလွယ်တကူ ရှာ၍ လာနိုင်ပါသည်။🌐
ကြိုတင်​ Booking ပြုလုပ်​​ပြီး
JY&apos;s Auto Repair
JY ဆိုတဲ့ ၀ပ်လျော့
ပိုင်ရှင်က ကျွန်တော်တို့ ကားလောကက ကိုငယ် (ခ) နေဇင်လတ်
ယိုးဒယားနိုင်ငံတွင်လက်ရှိနေထိုင်လျက်ရှိသည့် Head Machine ဆရာဂျိုး (Joseph) နှင့်
တွဲဖက် ဆရာစိုးမိုး ၊ဆရာသူရ( ဆရာလပြည့်) ၊
အလိုင်းမင့်ဆရာ လုပ်သက် ၂၅ နှစ်ကျော် ဆရာဇော် (Zaw Brother)နှင့်
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဂီယာဘောက်စ်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိ ဆရာနေ နှင့် မလေးရှားမှသူ၏တပည့် မောင်မျိုး တို့နှင့်
တွင်ခုံလုပ်သက် နှစ် ၃၀ ကျော်ရှိသောဆရာဇော်ဦးတို့ ဖြင့် တက်ညီလက်ညီ ချီတက်လျှက်ရှိနေတဲ့ ၀ပ်လျော့ဖြစ်ပါတယ်
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြသနာ အရပ်ရပ်များကို တစ်နေရာထဲ မှာ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအစုံရှိတဲ့
ဥပဒေရေးရာကုစားရေးအဖွဲ့ (မြန်မာ) သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဥပဒေရေးရာကုစားရေးလူငယ်အဖွဲ့ (Youth Legal Clinic – YLC) အနေဖြင့် လူမှုရေးကိုစိတ်ဝင်စားသော ဥပဒေရေးရာလူငယ်ပညာရှင်များဖြင့် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည်။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မြှင့်တင်ကာကွယ်ပြီး တရားမျှတမှုရရှိစေရေးနှင့် မရှိဆင်းရဲသားများ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသူများနှင့် အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးသူများဘက်မှ ရန်တည်ရေးဟူသော အခြေခံမူများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
Mango company limited သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဈေးကွက်ဖြန့်ဖြူးရေကိုဦးဆောင်နေသော company တခုဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Delivery Services
ရောင်းသူ၊ ဝယ်သူ အဆင်ပြေစေမယ့်
မြန်မာနိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံး အိမ်တိုင်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု။
ကြည်နူးစရာ အမှတ်တရများ၊ Oway နဲ့ ခရီးသွား
🚌 Express Bus
📄 Visa စတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ Oway ကိုသာဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
လူကြီးမင်းရဲ့လုပ်ငန်းမှာ ၀န်ထမ်းရေးရာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေပါသလား?
၀န်ထမ်းများရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များကို ရောက်ရှိချင်ပါသလား?
👉🏻 စိတ်မပူပါနဲ့! ၀န်ထမ်းရေးရာအတွက်ဆို Panellist Business Services ရှိပါတယ်
Panellist Business Services မှ အောက်ပါ HR ၀န်ဆောင်မှုများကို ပေးလျှက်ရှိပါတယ်
2. ၀န်ထမ်းများအတွက် လုပ်ငန်းစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်
(Employability Skills Development Programme, ESDP)
3. လူကြီးမင်းတို့ကုမ္ပဏီ၏ HR ကိစ္စများကို စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်း
(Outsource HR Solutions)
Phoe Phyu & Associates Law Firm
ဖိုးဖြူနှင့်ရောင်းရင်းများဥပဒေအတိုင်ပင်ခံလုပ်ငန်းသည် မြေယာပြသာနာများနှင့်ကုန်သွယ်စီးပွားလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အထူးပြုအကျိုးဆောင်ပေးလျှက်ရှိသော ဥပဒေပညာရပ်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ ပေးအပ်လျှက်ရှိသောဝန်ဆောင်မှုများမှာ
၁။ ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံနှင့် ဥပဒေသုတေသနလုပ်ငန်း၊
၅။ PESTLE & SWOT Analysis ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုလုပ်ငန်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
🇲🇲 Royal Express Myanmar ကို ယုံကြည်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိသော မိတ်ဆွေများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပထမဦးစွာ ပြောကြားပါရစေ။ 🙏🙏
🌿 မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အားပေးမှုကြောင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့ အခုလို နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေနိုင်တာပါ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Feedbacks မှတဆင့် Royal Express Myanmar အပေါ်ထားရှိသော ယုံကြည်အားကိုးမှုများကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားဖို့ ခွန်အားသစ်များစွာ ရရှိပါတယ်။ 🌿
💐 ယခုရောက်ရှိနေတဲ့ နှစ်သစ်မှာလည်း Royal Express Myanmar မှ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် အလုပ်အကျွေးပြုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ 💐
🎉 တဆက်တည်းမှာပဲ မိတ်ဆွေတို့
Tee Delivery Serivce
Tee Delivery Service မှ ရန်ကုန် - မန္တလေး အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ကုန်ပစ္စည်းများကို ၁၀၀% အပြည့်တာဝန်ယူမှုဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ ခင်ဗျ။
စိတ်ချရမယ် , မြန်ဆန်ရမယ် , တာဝန်ယူမှု အပြည့်ရှိရမယ် ဆိုသော ဝန်ဆောင်မှုတွေ ကိုအပြည့်အဝပေးဆောင်နိုင်တဲ့ Delivery Service တစ်ခုဆိုလည်းမမှားနိုင်ပါဘူး ခင်ဗျ။
တယ်လီနော်မြန်မာသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင်သင့်တင့်သည့်ဈေးနှုန်းဖြင့် လွယ်ကူစွာရယူနိုင်သည့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။၂၀၁၄ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် မြို့ကြီး ၃မြို့ ၌စတင်လခဲ့သော မိုဘိုင်းကွန်ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှား မြို့ငယ်များနှင့်ကျေးလက်ဒေသများသို့ပါဖြန့်ကျယ်လျက်ရှိပါသည်။တယ်လီနော မြန်မာသည်ဥရောပနှင့် အာရှရှိ အသုံးပြုသူ သန်း၁၆၀ ကျော်ကို မိုဘိုသ်းဝန်ဆောင် မှု ပေးနေသော ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းအောပရေတာ တစ်ခုဖြစ်သည့် တယ်လီနော အုပ်စု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Tokyo Auto Service Myanmar
သင့်ကားလေး ကျန်းမာရေး ကောင်းမကောင်း အရင် စစ်ဆေးထားသင့်တယ်နော်......
Tokyo Auto ရဲ့ကားကျန်းမာရေး (၃၄)မျိုး စစ်ဆေးခြင်း အား >>> ၁၅,၀၀၀ကျပ် ဖြင့် စစ်ဆေးပေးသွားမှာပါ။ (ပုံမှန် ၂၅,၀၀၀ကျပ်)
ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း / လာနိုင်မယ့် နေ့ရက် ,အချိန်များပြောပြပြီး အမြန်စာရင်းသွင်းပါရန်။(ချတ်ဘောက်/ကွန်မင့်/ဖုန်း)
ခရီးမသွားမှီ အလုံးစုံမော်တော်ယာဉ်အာမခံ လည်း ထားထားသင့်ပါသည်။ မိမိကားတန်ဘိုးရဲ့၁%ခန့်ပေးသွင်းရုံဖြင့် #အာမခံ၏အကာအကွယ် #၁နှစ်တာလုံးရရှိနိူင်မှာဖြစ်ပါသည်။(အသေးစိတ် အားမနာတန်း မေးမြန်း တိုင်ပင်ပါနော်။)
U Kyaw Myint Law Firm
ဥပဒေ နှင့် ပတ်သတ်သော အသိပညာ ဗဟုတုတ များကို မျှဝေပေးပါသည်။ ဆင်းရဲသော သူများကိုလည်း အခမဲ့ တရားဥပဒေ အကြံပေးပါသည်။
( Car Rentals Services )မိသားစု / သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘုရားဖူးခရီးစဉ် / အပန်းဖြေခရီးစဉ် ကို သီးသန့်သွားမလား ....?
Company အသင်းအဖွဲ့တွေ လေ့လာရေးခရီးစဉ် / ပရဟိတခရီးစဉ်
သီးသန့် သွားမလား ....?
အဖွဲ့လိုက် သီးသန့်ခရီးစဉ် အတွက်
ကားစီစဉ်ရတာ အခက်အခဲဖြစ်နေလား ...?
ကား အ တွက် ခေါင်း စား စ ရာ မ လို ပဲ
ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် စိတ်ကျေနပ်ပျော်ရွှင်မှု အပြည့်အဝရရှိစေဖို့
Car Rental Service နှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ခင်ဗျာ ။
2 ယောက်စီးမှ စ၍
53 ယောက်စီး အထိ
အသုံးပြုလိုသည့် ခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် စင်းလုံးငှား
Yangon Door2Door သည်မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး အစာအစာများသယ်ယူပို့ပေးသည့်ကိုဝန်ဆောင် မှု ဖြစ်ပါတယ်
Yangonity Food Delivery
မင်္ဂလာပါ အချစ်တော် Foodies တို့ရေ 🤩🤩🤩🤩
အခုခေတ်မှာ အစားအသောက်အနေထိုင် ကို ဂရုစိုက်လွန်းလျှင်ဖြင့် လှပကျော့ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာ ပါ🕺🥔🥚🧀🍅🥦🌽
ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ အညီ ညီညွတ်မျှတစွာ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးထားတဲ့ "The Box Myanmar (Healthy Meal Box) တွေကို 🥗🍱
ကိုယ်တို့ #YangonityFoodDelivery မှတဆင့် မှာယူသုံးဆောင်လို့ ရနိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းလေးပေးချင်တာပါ 😇😇😇
#TheBoxMyanmar က အစားအစာတွေကို မှာယူချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်တို့ #YangonityFoodDelivery ကို ခုဘဲ ဖုံးဆက်မှာလိုက်တော့နော် 🤙